Mandalay Gazette သို့ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » Mandalay Gazette သို့ပေးစာ
Mandalay Gazette သို့ပေးစာ
Posted by kolulay on Sep 24, 2011 in Myanmar Gazette |4comments
လူလေး ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ အကြောင်း စဉ်းစားမိတယ်ဗျ။ ဒီ project ကြီးပြီးဖို့ဆိုတာ အလုပ်သမားတွေပါမှ ပြီးဆုံးမှာပါ။ သူတို့တွေက မိခင် ဧရာဝတီ ကို သတ်မယ့် အစီအစဉ်မှာ ဘာလို့ ဓား ၀ိုင်းသွေးပေးနေတာလဲလို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘက်က ကြည့်ရင်လည်း သူတို့တွေ လုပ်နေတာ အကျိုးအမှန်ကို မသိလို့လား၊ ပိုက်ဆံပို ရလို့လား၊ စိတ်ချမ်းသာလို့လား(အနေအစားချောင်လို့လား)၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့တွေ မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ တခြားမှာနေရာ မရကြလို့လား။ စဉ်းစားစရာတွေပါ။ သူတို့တွေသာ အကျိုးဆက် အမှန်ကို သိရင်၊ တခြားမှာ အလုပ်ရမယ်ဆို ရင် ဒီလို အလုပ်မျိုးလုပ်ကြမှာလား။ လူလေး ပြောရဲပါတယ် ဘယ်သူမှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့တွေလည်း မြန်မာတွေ ဧရာဝတီကို ချစ်ကြသူတွေပါပဲ။ သို့ပေမယ့်လည်း မိခင်၊ ဖခင်တစ်ယောက်က ကိုယ်တိုင်အငတ်နေနိုင်ပါတယ်၊ သူတို့ သားသမီးတွေ ဆာလို့ငိုနေတာကိုတော့ မကြည့်နေနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါ။ မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ အမည်းစက်ကြီးဖြစ်မယ့်အလုပ်ကို သူတို့တွေ က ငါတို့လုပ်ခဲ့တာလို့ ဂုဏ်ယူကြချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း လူကြားထဲမှာ “ဒါကြီးဆောက်တုန်းက ငါ့အဖေက ဦးစီးခဲ့တာ၊ ငါမိဘကတော့ဖြင့် ဘယ်နေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့တာလို့ ” ဂုဏ်ယူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ သူတို့ သိနိုင်ကြလား။
တကယ်တမ်း မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းအကြောင်း ကို လူကြီးတွေ၊ လူငယ်တွေ အကြား ပိုပြီး ပျံ့ နှံ့ မယ်၊ လူသိပိုများမယ်ဆိုရင် (သို့) အလုပ်သမားမိသားစုတွေ ပိုပြီးသိမယ်ဆို အကျိုးဆက် ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်။ လုပ်နေတဲ့ လူတွေ (လူကြီးပိုင်း အရာရှိတွေ) ကော၊ အောက်ခြေအလုပ်သမားမိသားစုတွေကော ပါဝင်လာစေချင်တယ်။ သူတို့ အတွက်အခြားမှာလည်း လုပ်ကိုင် နိုင်ဖို့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တွေရှိစေချင်တယ်ဗျာ။ လူလေးတို့ တွေ ဒီစီမံကိန်းကြီးကိုကန့်ကွက်ရင်း၊ စီမံကိန်းက အလုပ်မားတွေ တခြားနေရာမှာ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး ရင် ဒီလုပ်ငန်းကြီး ဘယ်လို လည်ပတ်နိုင်တော့မှာလဲ။ သူငယ်တန်းကတည်းက လူလေးတို့သင်ခဲ့ရတဲ့ စာပိုဒ်လေးပါ။
ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့ နိုင်ပါသည်။
လူလေးတို့ ဂေဇတ်ကနေပြီး အလုပ်ရှင်တွေ၊ အခြားမီဒီယာတွေအားလုံးကို ကူညီပေးဖို့ အသိပေးနိုင်ပါစေ။ သူကြီး နဲ့ တကွ ရွာသူ ရွာသားတွေ အားလုံးလည်း ကူညီပေးနိုင်ပါစေဗျာ။
ကောင်းပါတယ် အဲလိုစဉ်းစားတာ တစ်ယောက်မှမတွေ.၇သေးဘူး
သူတို.က စီမံကိန်းဆွဲတယ် အလုပ်သမားခေါ်တယ်
အဲစီမံကိန်းမရှိလို. လဲ ငတ်ပြီးတော.မသေနိုင်လောက်သေးပါဖူး
အဲလိုသာ လိုက်တွက်နေ၇င် ကျွန်တော်တို.ဘာမှတောင်လုပ်လို.မ၇လောက်ဖူး
အခု ကျနော် သိရသလောက်က မြန်မာအလုပ်သမားတွေနဲ့စာရင် တရုတ်အလုပ်သမားတွေက ပိုများ သလားလို့။
နောက်နှစ်ဆိုရင် တရုပ်အလုပ်သမား ငါးသောင်းကျော် ထပ်ထည့်ဦးမယ်လို့ ကြားတယ်။ တကယ်တော့ အလုပ်အကိုင် ငတ်မွတ်မှုက မြန်မာနဲ့စာရင် တရုတ်တွေမှာက ပိုဆိုးနေတယ်.။ ပြီးတော့ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်မှုမှာလည်း တရုပ်က သာတယ်။ တရုပ်ကုမ္ပဏီ က တရုပ်အလုပ်သမားတွေနဲ့ လုပ်နေတဲ့ လမ်းစီမံကိန်းမှာ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ တစ်မနက်နဲ့တင် ထွက်ပြေးကုန်ကြတာ မြင်ဘူးတယ်။ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံသားတွေက သူတို့လို ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်စားဖူးတာမှ မဟုတ်ပဲဗျာ။
အခုလည်း အောက်ခြေထက်စာရင် အထက်ကို အဓိကထား ဆော်သင့်တယ် ထင်တယ်ဗျာ။
ဒါက နိုင်ငံရေးလည်း မဟုတ်တော့ သူတို့အနေနဲ့လည်း အခက်ဗျ။ ဦးကျော်ဆန်း ငိုတာကို အလကား မထင်နဲ့။
– အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်မှုမှာလည်း တရုပ်က သာတယ်။
– တရုပ်ကုမ္ပဏီ က တရုပ်အလုပ်သမားတွေနဲ့ လုပ်နေတဲ့ လမ်းစီမံကိန်းမှာ
မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ တစ်မနက်နဲ့တင် ထွက်ပြေးကုန်ကြတာ မြင်ဘူးတယ်။
– ကျုပ်တို့ နိုင်ငံသားတွေက သူတို့လို ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်စားဖူးတာမှ မဟုတ်ပဲဗျာ။
Awww, Myanmar, Myanmar !!!
” မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ တစ်မနက်နဲ့တင် ထွက်ပြေးကုန်ကြတာ”
Do they really want to be rich & developed ???
Does Myanmar deserve to be rich & developed ???
ဘယ်သူသေသေ ငတေ မာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ .. ဖွတ်ကြားဂေါင်းတတ်ထားတဲ့ လူတစ်စု နဲ့
ကျွေးတာရက် အဲလေ..စားနေတဲ့ ကျပ်မပြည့်တဲ့ ခိုင်းတာလုပ်ရတဲ့ အစေအပါးတွေ သံဝေဂ
ရဖို့က တော်တော်ခက်တယ်.. ဘုန်းကြီးတစေလိုပဲ ..ဘာမှ ကြောက်တာမဟုတ်ကြဖူး …
လုပ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ .. ဘာတဲ့ “ ကန့်ကွက်တဲ့သူက နဲနဲလေးပါ ” တဲ့ ။
“ မေး။ ။ ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေများနေတာ ဘာ့ကြောင့်လို့ ထင်မြင်မိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ များနေတယ်ဆိုတာက များချင်ယောင် ဆောင်နေတာ။ အင်တာနက်ဆိုတာက ကျနော်တို့ရုံး တရုံးလုံးတောင်မှ ကြည့်နိုင်တဲ့လူက ၄-၅-၁ဝ ယောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒါတောင်မှ အလကား ပေးထားတာ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ ကြည့်ဖို့ဆိုတာက ပိုခက်တာပေါ့ဗျာ။ ဒီလို အကျိုးမရှိတဲ့ ဟာလေး တမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာကို အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖတ်နေတော့ ဒါတွေကို များတယ်လို့ပြောဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ ”
ခက်တာက ..ပြည်သူတွေကို ငတ်အောင်လုပ်ထားခဲ့တော့..
၁၀၀၀-ကျပ် ၊၁၅၀၀-ကျပ် ရလဲ လိုက်ပီး ဆန္ဒပြတုံးက လိုက်ရိုက်လိုက် ၊ ဆန္ဒခံယူပွဲတုံးက ချီတက်လိုက် ၊
ဆန္ဒမဲတွေ ပေးလိုက်နဲ့ လုပ်တဲ့သူတွေကရှိနေလေတော့ .. သိပ်တော့မလွယ်လှဘူး
ဘုန်းကြီးတစေတွေ ပဲ ကျွတ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ် ……